.ဂုဏ်ယူပါတယ် သဂျီး။ သဂျီးက ဧရာမအလုပ်ကြီးကို လုပ်ခဲ့တာပဲ။
.ဒေါ်ခိုင် ပြောတဲ့ 4L ကိုလည်း တအားကြိုက်။ Look, Listen, Learn and Leave or Linger အစား
အန်တီပြုံးးး ဒီပိုစ့်ကို ဘာသာပြန်ပေးပါလားငင်
မြန်မာလို ဖတ်ချင်လို့။ အင်္ဂလိပ်လိုက ဖတ်ရတာ ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နဲ့မို့. . .
ဒါနဲ့ သဂျီးမင်းက အနောက်တိုင်း ဝတ်စုံနဲ့
သဂျီးကတော်ကျတော့ မြန်မာဆန်တဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ အဲ့လိုကြီး အတူ ပွဲတတ်တာလား။
ချို့တဲ့ယိုင်နဲ့စွာ စာလေး ဖတ်လိုက်. . .
နားလည်လိုက်တာတော့. . .
အင်မတန် ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ အနေအထားတခုကို ဖန်တီးလိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာပဲ
မြန်မာပြည်က…ယူအက်စ်ရောက်နေတဲ့.. အမတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီး… စကားစမြည်ပြောဖို့…။ အောက်မှာက.. စာရင်း..။
အခုထွက်ထားတဲ့.. သတင်းစာတွေလည်း ဝေလိုက်ပါ့မယ်…။
ဆရာမရွှေကူမေနှင်းစာတွေ… ပြုံးမမစာတွေ.. လွှတ်တော်ထဲ တန်းရောက်ကုန်တာပေါ့…။
.သဂျီးရယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီသတင်းစာလေးများ တစ်စောင်လောက် မရနိုင်ဘူးလား။ ကိုယ့် ဆောင်းပါးလေး ပါတော့ သိမ်းထားချင်တာပေါ့။
Congratulations ပါ သူကြီး။
ကိုယ့်ပုံလေး လူဝင်အောင် ကြည့် အောင် ဒါထက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ် လေးများ တပ်ပါတော့။
ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ညီမခိုင် က။
သူ့ထမိန်ဆင် လေး က လှလိုက်တာ။
စားပွဲ မှာ စုံတွဲ တွေ ကို တွဲ မထိုင်ခိုင်းတာ အဲဒီမှာ ယဉ်ကျေးမှု လား။ အဲဒီ ပွဲ မျိုးမို့လား။
စကားပြောနေတဲ့ စုဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မီးမီး က လဲ အတော်လေး ကြည့်ကောင်း ပြီး ကျက်သရေရှိလိုက်တာ။
. ပြောရရင် ဦးဝင်းအောင် ကို အမဲစာရင်းကပယ်လိုက်တာ ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကျန်နေသူ တစ်ချို့ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် အတော် ရှိနေကြတယ်။
အဲဒီထဲ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး များ ရဲ့ သားသမီး တွေလဲ အများကြီး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရကြရင်လဲ မုဒိတာ ပွါးဖို့ဘဲ ရှိပါတော့တယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဆွဲနိုင်တဲ့ တနည်းပေါ့။
နောက်ကခုံမှာနေရာပေးထားတာ.. အဲဒီမထိုင်ပဲခပ်တည်တည်နဲ့.. သူ့အမေဘေးသွားထိုင်နေလေရဲ့..။
စုံတွဲတွေတူတူထားတာပါ..။ စားပွဲနံပါတ်၎ က.. ၂ယောက်က.. နေရာချပေးတဲ့အတိုင်းမထိုင်တာမို့.. လေဒီခိုင်စားပွဲ၃ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါကြောင်း…။
ယူအက်စ်ကနေ.. မြန်မာပြည်ကိုပေးလိုက်ချင်တဲ့ မတ်စိကတော့…
နောက်ဆို…စမတ်ဆန်ရှင်.. ခရိုနီတဦးချင်းစီကို တားဂက်ထားမယ်ဖြစ်ပြီး.. တနိုင်ငံလုံးခြုံထားတဲ့.. ဆန်ရှင်တော့.. ဖယ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ကြောင်း..။
ဒါကလည်း.. ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲ.. တရားမျှတကောင်းမွန်မှဖြစ်ပါကြောင်း…။
လောလောဆယ်တော့.. ဇွန်လမှာ.. ထုံးစံအတိုင်း…. ရယ်လို့..။
ခေါင်းစဉ် ကြည့်ပြီး မဝင်ဖြစ်တာ။
မင်းသား၊မင်းသမီး နဲ့ လွဲတော့မလို့။
ပြူးပြဲကြည့်​​နေတာ ဘယ်​မှာလဲဟဲ့ ငါ့သူကြီးက
အပေါ်ကနေ ရေ… ဒုတိယမြောက်ပုံမှာ…
နာမည်တွေလည်း ပုံအတိုင်း အစဉ်လိုက်ရေးထားတယ်လေ…
.ပြောသာပြောရတယ်… အဲဒီပုံထဲက သူကြီးက ကျနော်တို့ရွာထဲက..(စာနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့)သူကြီးနဲ့ မတူရေးချ မတူ…